Muuse Suudi oo Shir u qabtay Beesha hawiye iyo War ka soo baxay Kulanka#aqriso warbixin | Xaqiiqonews
Muuse Suudi oo Shir u qabtay Beesha hawiye iyo War ka soo baxay Kulanka#aqriso warbixin
Kulan looga hadlayo maqaamka magaalada Muqdisho iyo xuquuqda ka maqan Gobolka Banaadir oo ay isugu yimaadeen Odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Hawiye ayaa maanta ka dhacay Muqdisho.
Kulankan oo ahaa kii labaad ee noociisa ah ayaa waxaa soo abaabulay Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tisan Aqalka sare, waxaana ka qeyb galay Nabadoonada, waxgaradka, odayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha Hawiye qaarkood.
Waxaa shirka ku sugnaa qaar ka mida xildhibaanada labada gole ee beesha Hawiye. iyadoo dowladda Soomaaliya looga codsaday in Maqaamka Muqdisho xal loo helo isla markaana madaxweynahaa iyo guddoomiyaha G/Banaadir looga fadhiyo arrintaasi.
Ka qeybgalayaasha shirka ayaa ku dooday inuusan shirku ahayn mid lagu mucaaradayo dowladda ama cid kale balse uu yahay shir lagu raadinayo xaqa ka maqan Gobolka Banaadir.
Muuse Suudi ayaa si weyn uga horjeeda dowladda madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Kheyre, taasoo ka dambeysay markii xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir.